ငယ်ရွယ်နုပျိုစေမည့် နည်းလမ်းများ- ကျန်းမာသောအသားအရေအတွက် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သော အလေ့အကျင့် ၇ ခု - ကျန်းမာသောလူနေမှု 2022
ငယ်ရွယ်နုပျိုစေမည့် နည်းလမ်းများ- ကျန်းမာသောအသားအရေအတွက် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်သော အလေ့အကျင့် ၇ ခု
1. မနက်စာအတွက် ကော်ဖီမဟုတ်ဘဲ လက်ဖက်ရည်သောက်ပါ။
2. သင့်မျက်နှာသစ်သီးဝလံများနှင့် အသီးအရွက်များ - အချိုများမစားပါ။
3. အိမ်အပြင်မထွက်ခင် နေရောင်ကာခရင်မ်လိမ်းပါ။
4. H2O များများသောက်ပါ။
5. သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။
6. သင်၏လိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်ရေကို မြှင့်တင်ပါ။
လူငယ်များ၏ စမ်းရေတွင်းကို ရှာဖွေရန် အဆုံးမရှိ ရှာဖွေမှုသည် များစွာသော ရာနှင့်ချီသော မျက်နှာလိမ်းဆေးများ၊ ပလပ်စတစ်ဆာဂျရီများနှင့် ထူးထူးဆန်းဆန်း အလှအပဆိုင်ရာ ကုသမှုများ à la vampire မျက်နှာကိုပင် သုံးစွဲရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ငယ်ရွယ်နုပျိုသော အသားအရေအတွက် လျှို့ဝှက်ချက်မှာ ပလပ်စတစ် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်၏ လက်ထဲတွင် သို့မဟုတ် အိုမင်းရင့်ရော်မှု ဆန့်ကျင်သည့် ပုလင်းထဲတွင် မဟုတ်ဘဲ သင့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံအတိုင်း ဖြစ်သည်။ သင်၏ အရေပြားကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှု၏ သက်ရောက်မှုများကို တွန်းလှန်ရန်၊ နုပျိုသော လိုင်းများနှင့် အရေးအကြောင်းများကို လျှော့ချရန်နှင့် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု၏အစကိုပင် တားဆီးရန် ဤနေ့စဉ်အသက်အရွယ်ကို အံတုနိုင်သော အလေ့အကျင့် ခုနစ်ချက်ကို ကျင့်သုံးပါ။
မနက်ခင်းမှာ ဂျိုးတစ်ခွက်မသောက်တာက ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက် စိတ်ကူးယဉ်လို့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ရိုးရှင်းတဲ့ကော်ဖီကနေ လက်ဖက်ရည်ကို မနက်ခင်းမှာ ပြောင်းလဲတာက အရေးအကြောင်းတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်း၊ အထူးသဖြင့် အဖြူရောင်လက်ဖက်ရည်ကို ရွေးချယ်ခြင်းက ကင်ဆာ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကိုတောင် လျှော့ချပေးနိုင်ကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဖြူတွင်တွေ့ရသော အင်ဇိုင်းပမာဏအနည်းငယ်သည် ခွက်တစ်လုံးတွင်တွေ့ရသည်ထက်နည်းသည် - ခန္ဓာကိုယ်ကို collagen နှင့် elastin များကို ဖြိုခွဲသည့် အင်ဇိုင်းများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ ဒီနှစ်ခုက မင်းအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အရေးအကြောင်းတွေမဖြစ်အောင် အရေပြားရဲ့တင်းမာမှုနဲ့ ပျော့ပျောင်းမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ အတူတူလုပ်ဆောင်ပါတယ်။
အချိုပွဲများ အစုံအလင်ဖြင့် ဖြားယောင်းလာသော သရေစာအချိန်ကို တွန်းလှန်ရန် ခဲယဉ်းသော်လည်း အဆိုပါ ချောကလက်ချစ်ပ် ကွတ်ကီးကို စတော်ဘယ်ရီ လက်တစ်ဆုပ်စာဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြင့် သင့်အသားအရေကို နုပျိုပြီး တောက်ပနေစေမည်ဖြစ်သည်။ သကြားစားသုံးမှုကို ကန့်သတ်ခြင်းသည် သင့်မျက်နှာအတွက် အကျိုးရှိစေမည်ဖြစ်ပြီး သကြားအလွန်အကျွံစားခြင်းကြောင့် အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။ 2013 ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အသက် 50 နှင့် 70 ကြားရှိလူများ၏ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏ တိုးလာခြင်းသည် ၎င်းတို့ကို ငါးလမှ ခုနစ်လအထိ အသက်ကြီးလာစေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၏ ထင်ရှားသော လက္ခဏာများကို ကာကွယ်ရန်၊ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဒြပ်ပေါင်းများ ကြွယ်ဝသော ဘယ်ရီသီးများကို စားသုံးပါ - အချို့သော ကင်ဆာများ၏ ကြီးထွားမှုကို နှေးကွေးစေကာ ဦးနှောက်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ကြွက်သားထုထည်နှင့် ဟန်ချက်ညီစေနိုင်သည်။ 2009 လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် antioxidant ellagic acid သည် ကော်လာဂျင်ပျက်စီးမှုနှင့် ရောင်ရမ်းမှုတုံ့ပြန်မှုကို ဟန့်တားနိုင်သည် - အရေးအကြောင်းများ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
SPF 15 နှင့်အထက်ရှိသော ကျယ်ပြန့်သောရောင်စဉ် (UVA/UVB) နေရောင်ကာခရင်မ်ကို နေ့စဥ်အသုံးပြုခြင်းသည် နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အသားအရေအိုမင်းရင့်ရော်မှုကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ နေရောင်ခြည်မှ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၏ လက္ခဏာရပ်များ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ဖြစ်စေသည်ဟု အရေပြားကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင် အရေးအကြောင်းများ၊ ကြမ်းတမ်းသောအကွက်များ၊ လျော့တွဲခြင်းနှင့် အရေပြားအရောင်ပြောင်းခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် 2013 ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ နေရောင်ကာခရင်မ်သည် အရေပြားကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ရုံသာမက နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်သော ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုပါ တားဆီးနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ နေရောင်ကာခရင်မ်ကို နေ့စဥ်အသုံးပြုခြင်းသည် အချိန်ကြာမြင့်ပြီးနောက် အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
ရေသောက်ခြင်းသည် သင့်အသားအရေကို အချိန်နှင့်အမျှ နုပျိုတောက်ပနေစေရန် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေဓာတ်ရှိနေခြင်းက အရေပြားလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေပြီး အရေပြားပြန်လည်ပြုပြင်မှုကို လျော့ပါးသက်သာစေပါတယ်။ 2007 ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ရေ 500 မီလီလီတာ သောက်သုံးခြင်းသည် မိနစ် 30 ကြာ အကဲဖြတ်ပြီးနောက် အရေပြားအတွင်းရှိ သွေးကြောမျှင်များမှတစ်ဆင့် သွေးစီးဆင်းမှုကို တိုးစေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အရေပြားတွင် ရေဓာတ် 30 ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပါဝင်ပြီး အထူးသဖြင့် ရေများများသောက်ပါက ပိန်လှီသောအသွင်အပြင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ရေများများသောက်ခြင်းက အသားအရေကို ရေဓာတ်ထိန်းပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကျန်းမာတဲ့အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေပါတယ်။
အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သူများသည် ငယ်ရွယ်နုပျိုသော အသားအရေကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း၏ သက်ရောက်မှုများကို တွန်းလှန်နိုင်သည်။ တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ်ခန့် အကြမ်းဖျင်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး “အရေပြားအသက်” ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်စေသောကြောင့် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက အသားအရည်ကို ပါးလွှာခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး stratum corneum - epidermis ၏ အပြင်ဘက်ပိုင်း - ထူလာကာ အရေပြားကို အဏုကြည့်အဆင့်တွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ ငယ်ရွယ်နုပျိုစေပါသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းသည် အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် ဝက်ခြံများကို ရှင်းပစ်ရန်လည်း လူသိများသည်။
သင့်အသက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကို ဖြတ်ကျော်ရန် စာရွက်များကြားရှိ အရာများကို အပူပေးရုံဖြင့် သင့်အား ငယ်ရွယ်နုပျိုသော အသားအရေကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် သင့်အား ခုနစ်နှစ်အထိ ငယ်ရွယ်နုပျိုစေသည်ဟု ဗြိတိန်စိတ်ပညာရှင် ဒေါက်တာ ဒေးဗစ် ရက်ခ်စ်က British Psychological Society သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ငယ်ရွယ်နုပျိုစေရန်အတွက် အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများသည် တက်ကြွလန်းဆန်းနေပြီး အသက်အရွယ်ရလာသည်နှင့်အမျှ ကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုဘဝကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ဟု Weeks က ယုံကြည်သည်။ တစ်ပတ်လျှင် သုံးကြိမ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် သင့်တွင် အချိန်နှင့် ခွန်အားရှိလျှင် သင့်၏ငယ်ရွယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် မှော်နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ညဥ့်နက်ပိုင်းနဲ့ ညတိုင်းကို ချန်ထားခဲ့ရပြီး မင်းရဲ့အသားအရေအတွက် မင်းရဲ့အလှကို အနားယူဖို့ အချိန်တန်ပြီ။ အသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ သင့်အသားအရေနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အား ဖြည့်တင်းပေးပြီး နောက်နေ့တွင် ပြန်လည်နုပျိုလာစေရန် ကူညီပေးရန်အတွက် အိပ်စက်ခြင်းကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ 2013 ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အိပ်ရေးမဝခြင်းသည် အရေပြားကို အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်စေခြင်း၊ မညီညာခြင်း နှင့် လိုင်းကောင်းခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်သည် ။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ညံ့ဖျင်းသော အိပ်စက်ခြင်းသည် အရေပြားအိုမင်းခြင်း၏ လက္ခဏာများကို အရှိန်မြှင့်နိုင်ပြီး ညဘက်တွင် အရေပြား၏ သူ့အလိုလို ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းကို အားနည်းစေသည်။
သင့်အသားအရေကို ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင် နုပျိုနေစေဖို့အတွက် ဒီနေ့စဉ်အသက်အရွယ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ အကြံပြုချက်ခုနစ်ချက်ကို စမ်းကြည့်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ယုံကြည်မှု ပိုကောင်းလာမယ်။
ဤ Halloween 2021 ကို ပေးဆောင်ရန် အကောင်းဆုံး ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော သကြားလုံးရွေးချယ်စရာ ၁၀ ခု